निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले केही दिन पहिला मच्चि मच्चि भाषण गरेका थिए, “स्थानीय तहको निर्वाचन दुईचरणमा हुनै सक्दैन ।” उनको यो भनाई सुने पछि धेरैले ओहो निर्वाचन आयुक्त भनेको यस्तो हुनुपर्छ । धैरैले टिप्पणी पनि गरे यीनले त सरकारलाई पनि टेर्ने रहेनछन ।
तर यो आसा धेरै दिन टिक्न सकेन । बालुवाटारमा मधेशी मोर्चालाई साछी राखेर प्रधानमन्त्रीले यीनका कान के फुकेका थिए यादवको दिमागले युटर्न लियो । अनि यीनले भन्न थाले चुनाव दुईचरणमा हुन्छ, बजेट ल्याउन पनि मिल्छ । यादव आयुक्त भएपछि आफ्नै हातले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता विपरित बजेट ल्याउन मिल्ने समेत घोषणा गरे । यदि बजेट ल्याउन नै मिल्थ्यो भने किन जारी गरेको आचारसंंहिता ?
राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगलाई व्यवस्थानपनको चुनौती
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ का लागि तय भएको छ । प्हिलो निर्वाचन र दोस्रो निर्वाचनको अन्तर एक महिनाको हुन्छ । यति लामो समयको अन्तर भएपछि राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोग र सरकाराालाई समेत ब्यबस्थापनमा कठिनााई उत्पन्न हुन्छ ।
प्हिलो निर्वाचन भए लगतै मतगणना गर्ने हो भने त्यसले दोस्रो निर्वाचनका लागि असर गर्छ । मत गणना गर्दा जसले पहिलोमा जित्यो त्यसले दोस्रोमा प्रभाव पर्छ । यदि मत गणना नगर्ने हो भने मत पेटिकामा माक्राले जालो लगाउछ । त्यसमा अर्को कठिनाई भनेको मतपेटिकाको सुरक्षाको सावल हो । तीस तीस दिन सम्म त्यसको सुरक्षाका लागि राजनीतिक दल र सुरक्षा निकाय तथा निर्वाचन आयोगले समेत निकै दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ । यस भन्दा अघि पनि दुई तहमा निर्वाचन भएका छन । तर तिनको गणना भने पछिल्लो पटक एकै चोटी भएको छ ।
कर्मचारी तथा प्रहरीको व्यवस्थापन चुनौती
निर्वाचन आयोगले एक महिनाका लागि म्यादी प्रहरी तथा सरकारी कर्मचारीको ब्यबस्था गरेको हुन्छ । तर दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा यसको दोब्बर व्यबस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । मानौ एक चरणको निर्वाचनका लागि अहिले सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि पचास हजार छुट्टाए पुग्छ । तर दुई चरणमा गर्दा यसको दोब्बर खर्च हुन्छ ।
बजेट पछि निर्वाचन आचारसंंहिताको ठाडो उल्लंघन
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता बिपरित हुन्छ दोस्रो निर्वाचन । निर्वाचन घोषणा भएपछि कुनै पनि नयाँं कार्यक्रम ल्याउन पाईदैन । तर निर्वाचन आयोगले किन आफैले जारी गरेको आचारसंहिता बिपरित चुनाव अघि बजेट ल्याउन लागेको हो । किन आयुक्तको मोड चेन्ज भएको हो ? कतै उनको दिमागमा धनदेवीको मोह पो परेको हो कि ? प्रश्न उठेको छ । सबै तिर बाट प्रश्न उठेको छ निर्वाचन आचारसंंहित अनुसार कि आयुक्त बेठीक कि चुनाव बेठीक ?
यो निर्वाचन आचार संहिताले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउन बन्देज लगाएको छ । तर निर्वाचन आयोग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव किन त्यस विपरित जान खोजिरहेका छन् ? निर्वाचन आयोग भित्रै बहसको विषय बनेको छ ।